Posted by ashin kusalasami on September 29, 2010
ဇင်ဆရာကြီး ဟက်ကူအင် (Hakuin)ကို အနီးအနားဝန်းကျင်က အိမ်ထောင်မပြုဘဲနေတဲ့ သူတော်စင်ကြီးတစ်ဦးလို့ ချီးကျူးထောမနာပြုကြတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့ လှပကြော့ရှင်းတဲ့ ဂျပန်မလေးကလည်း သူ့ကျောင်းအနီးအပါးမှာ နေပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ သူ့မိဘတွေဟာ သမီးလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိနေကြောင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ဗြုန်းစားကြီး သိလိုက်ရတယ်။ ဒါက သူ့မိဘတွေအတွက် အလွန် ဒေါသထွက်စရာကောင်းတယ်။ ဘယ်လိုမေးမေး ဘယ်သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆိုတာကို မပြောဘူး။ နောက် ခြိမ်းခြောက်မေးမြန်းကြည့်တော့မှ ဟက်ကူအင်နဲ့ ရတာပါလို့ ပြောလိုက်တယ်။
ဂျပန်မလေးမိဘတွေဟာ ဒေါသူပုန်ထပြီး ဟက်ကူအင်ဆီကို သွားခဲ့တယ်။ “သင့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သမီး ကိုယ်ဝန်ရနေပြီ”လို့ ဆိုတော့ ဟက်ကူအင်က တစ်လုံးပဲ ပြန်ပြောတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကလေးလေး မွေးဖွားလာတယ်။ သူ့မိဘတွေက “ဒါ မင်းနဲ့ရတဲ့ ကလေး မင်းမွေးစား”ဆိုပြီး ဟက်ကူအင်ဆီကို ခေါ်သွားပြီး ပေးလိုက်တယ်။ ဟက်ကူအင်က ဘာစကားမှ မပြောဘဲ မွေးစားထားလိုက်တယ်။ ဒီလို လုပ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကလေးအဖေအဖြစ် ၀န်ခံတယ်လို့ သဘောရပြီး လူတွေက သူ့ကို မကြည်ညိုတော့ဘူး။ ဂုဏ်သတင်းတွေလည်း မှေးမှိန်သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟက်ကူအင်ဟာ နည်းနည်းမှ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဘူး။ ကလေးကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။ အိမ်နီးချင်းအချို့ဆီကနေ နို့နဲ့ အခြားလိုအပ်တာလေးတွေ တောင်းရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကာလတွေ ကြာညောင်းသွားတော့ ကလေးအမေဖြစ်တဲ့ ဂျပန်မလေးဟာ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဟက်ကူအင် သူ့ကြောင့် ဒီလို ဒုက္ခတွေ ခံစားနေရတာ၊ နာမည်တွေ ပျက်နေရတာကို မကြည့်ရက်တော့ဘူး။ နောင်တတွေ ရလာတယ်။ သူ့မိဘတွေကို ငါးဈေးမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ အဲဒီကလေးရဲ့အဖေဖြစ်ကြောင်း အဖြစ်မှန် ပြောပြလိုက်တယ်။ အဲဒီစကားကိုလည်း ကြားလိုက်ရော ဂျပန်မလေးရဲ့ မိဘနှစ်ပါးဟာ ဟက်ကူအင်ဆီကို ချက်ချင်း သွားရောက်ပြီး ခွင့်လွှတ်ဖို့ အနူးအညွတ်တောင်းပန်တယ်။ ကလေးကိုလည်း ပြန်တောင်းပါတယ်။ ဟက်ကူအင်ကလည်း လိုလိုလားလား ခွင့်ပြုပါတယ်။ စကားတော့ တစ်ခွန်းမှ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးကို လှမ်းပေးရင်း တစ်ခွန်းတော့ ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ပြောပြတော့ “ဒီကောင်မ တော်တော်ဆိုးတာပဲ၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကမြင်းပြီးတော့၊ ဘုန်းကြီးတော့ သနားစရာပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ သူက ဆက်ပြောတယ်။ “ညက အိပ်ယာဝင်တော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို မျက်စိထဲမြင်ယောင်လာတယ်၊ စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုလေးမှန်း မသိဘူး၊ ဇင်ဘုန်းကြီးရဲ့ “အော်…ဒီလိုလား”ဆိုတဲ့ အသံက နားထဲမှာ ကြားယောင်လာတယ်၊ အေးချမ်းမှုတစ်ခု ကူးစက်ခံလိုက်ရသလိုပဲ”တဲ့။ တွေးတွေးလေး ပြောပြပါတယ်။
တစ်ယောက်ကတော့ “ငါကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကြည့်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သတိရတယ်။ စိဉ္စမာနကိုလည်း သတိရတယ်။ စိဉ္စမာနဟာ မြတ်စွာဘုရားကို နာမည်ဖျက်ချင်တော့ ညနေစောင်းပြီဆိုတာနဲ့ ဘုရားကျောင်းတော်ကို ၀င်၊ လူမသိအောင် ပြန်ထွက်၊ မနက်မိုးလင်းခါနီးကျတော့ ဘုရားကျောင်းတော်ကို ပြန်သွားပြီး ကျောင်းထဲမှာပဲ ညအိပ်ခဲ့သလိုလို လူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် လုပ်၊ စာတွေမှာ သူ့ကြောင့် ဘုရား နာမည်ပျက်တယ်လို့ မရေးပေမယ့်၊ ငါကတော့ သေချာပြောနိုင်တယ်၊ အနည်းအကျဉ်းတော့ နာမည်ပျက်ခဲ့မှာပဲ၊ ဘုရားရှင်အပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ သူဒီလိုလုပ်နေတာကို ဘယ်ယုံမလဲ၊ မြတ်စွာဘုရားကို မယုံကြည်သူတွေကတော့ စိဉ္စမာနဟာ ဘုရားရှင်နဲ့ ဘာညာဘာညာ စွပ်စွဲကြမှာပဲ၊ ဒီတော့ ဘုရားရှင်လည်း အနည်းအကျဉ်းတော့ နာမည်ပျက်မှာပဲ။ ဒါပေမယ့် အဖြစ်မှန်ပေါ်တဲ့အခါကျမှ အားလုံး သဘောပေါက်သွားခဲ့ကြရတာ။
အခုလည်း ကြည့်လေ။ ဟက်ကူအင်ဟာ ဒီစိဉ္စမာနအဖြစ်မျိုးထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ် ကြုံရတာပဲ။ ဂျပန်မလေးက စွပ်စွဲတော့လည်း မငြင်းခဲ့ဘူး။ အဲဒီလို မငြင်းလိုက်လို့ သူ နာမည်ပိုပျက်မှာလဲ သိမှာပါ။ မွေးလာတဲ့ကလေးကို လာပေးတော့လည်း မငြင်းပြန်ဘူး။ ကလေးလက်ခံလိုက်လို့ သူနာမည် ထိပါးသွားမှာ၊ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းရမှာကိုလည်း သူ သိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သူ ဘာမှ ဖြေရှင်းချက် မပေးဘူး။ ဒီတော့ ငါ ပြောချင်တာက အမှန်တရားလမ်းပေါ်က လူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ ကြာရှည် ကျရှုံးမှု မဖြစ်ဘူးဆိုတာပဲ”ဟု ပြောရင်း နံရံထက်က ပြက္ခဒိန်တစ်ချပ်ကို လှမ်းငေးနေခဲ့တယ်။
တစ်ချိန်လုံး ငြိမ်လာခဲ့တဲ့ ဘေးကသူငယ်ချင်းက စကားစဖို့ ဟန်ပြင်တယ်။ အားလုံးက သူဘာပြောမလဲဆိုတာကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ “ငါ့ကို ကွမ်းတစ်ယာလောက် ပေးစမ်းပါ”လို့ ဆိုလိုက်တော့ ရယ်မောလိုက်ကြတယ်။ “ငါတို့က တစ်ခုခု ပြောတော့မယ် ထင်နေကြတာ”လို့ ဆိုလိုက်တော့ “အေး … ငါလည်း ပြောဖို့ စောင့်နေတာ၊ ဒါပေမယ့် မင်းတို့ ပြောနေတာတွေက ကောင်းလွန်းတော့ ငါ စကားပြတ်သွားမှာ စိုးလို့ ငြိမ်နေတာ”လို့ ဆိုတယ်။ “အေးပါကွာ… နိဒါန်းတွေ ဒီလောက်ပျိုးမနေတော့နဲ့ ပြောချင်တာ ပြောလိုက်ကွာ”လို့ အားမလို အားမရသံနဲ့ တစ်ယောက်က ဆိုတယ်။
“ဟ ဆန်းလှချည်လား၊ ပြောပါအုံး”လို့ အားရပါးရအသံနဲ့ တစ်ယောက်က ၀င်ထောက်တယ်။ “ပထမဆုံး အမြင်ထဲက ဘ၀ပေါ့။ ဘ၀ဆိုတာက တိုက်ရိုက်အားဖြင့် ဇာတ်လမ်းထဲက ဇင်ဘုန်းကြီး ဟက်ကူအင်၊ ဂျပန်မလေး၊ မိဘများနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လူများရဲ့ ဘ၀၊ သွယ်ဝိုက်သောအားဖြင့် လူသားအားလုံးရဲ့ ဘ၀။ အဲဒီမှာ အားပြိုင်မှုနှစ်ခုက ဟက်ကူအင်နဲ့အခြားသူများပေါ့။ နှစ်ဘက်၊ ဟက်ကူအင်ရဲ့ဘ၀ဟာ ဖြူစင်တယ်၊ မြင့်မြတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်မလေးရဲ့မိဘတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုး ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ ကြည့်စမ်း၊ ဘယ်လောက်တောင် ဆန့်ကျင်နေလိုက်သလဲ။ အဲဒီတော့ ငါ ကောက်ချက်ချမိတာက ငါတို့တွေကော ကိုယ့်အမြင်ကို ဟုတ်လှပြီဆိုပြီး ဘ၀င်တွေ မြင့်နေလိုက်ကြတာလေ။ တကယ်တော့ အမြင်ထဲက ဘ၀တွေဟာ အစစ်အမှန်ဖြစ်ဖို့ မသေချာဘူး။ အတွေးထဲကဘ၀တွေဟာ အဖြစ်မှန်နဲ့ ဝေးနေတတ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ငါတို့ အတွေးတွေထဲကို အင်ဖော်မေးရှင်းအမှား၊ အချက်အလက်မှားတွေက တရစပ် ၀င်လာနေတယ်။ အဲဒီအမှားတွေ ရောစပ်လိုက်တဲ့ ငါတို့အမြင်၊ ငါတို့အတွေးတွေဟာ တစ်ယူသန်လာတယ်၊ တစ်ဖက်သက်ဆန်လာတယ်။ တစ်ခါ နောက်တစ်ခုက ဘ၀ထဲက အမြင်ပေါ့။ ဒါကို ငါ သဘောကျနေမိတယ်။ ငါတို့တွေ ပြောကြမယ်၊ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် တကယ့်ဘ၀ထဲမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ်မှာ အခြေခံတဲ့ အမြင်မျိုးကိုသာ အားကိုးသင့်တယ်လို့ ငါထင်တယ်။ ဘ၀ထဲက အမြင်သာ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ငါတွေးနေမိတာ”လို့ ပြောပါတယ်။
စကားဝိုင်းလေး ပြီးသွားတော့ စကားလုံးလေးတစ်လုံးက သူ့ဆီမှာ တရစ်ဝဲ၀ဲ ဖြစ်နေတယ်။ “အမြင်ထဲက ဘ၀၊ ဘ၀ထဲက အမြင်”လို့ ထပ်ခါထပ်ခါ တီးတိုးရွတ်ဆိုနေမိတယ်။ “ငါလည်း ငါ့အမြင်၊ ငါ့အတွေး သက်သက်လေးနဲ့ ဖြူစင်တဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ဘ၀ကို မှားမှားယွင်းယွင်း ဘယ်လောက်များများ ယူဆမိခဲ့သလဲ”။ ပြီးတော့ “ငါ့ဘ၀ကိုရော အမြင်မှားတွေနဲ့ မှားမှားယွင်းယွင်း ကောက်ချက်ချနေမိသူတွေ ဘယ်လောက်များများ ရှိနေနိုင်မလဲ”။ သူနှင့်လောကကြီး အပြန်အလှန် မြင်နေမိပုံကို သုံးသပ်နေမိတယ်။ အမြင်ထဲက ဘ၀ကို အာရုံမထားဘဲ ဘ၀ထဲက အမြင်တွေသာ မြင်မိအောင် ကြိုးစားရမယ်။ ဘ၀တွေကို အစစ်အမှန်အတိုင်း သိမြင်ဖို့ ဘယ်လို လုပ်မလဲလို့ စဉ်းစားကြည့်တော့ မေတ္တာတရားက ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ကောင်းရဲ့လို့ အဖြေတစ်ခု ရသည့်ပမာ ခံစားလိုက်ရတယ်။
It's the post I liked most.
If u don't mind,I would like to discuss the philosophical affairs with u on online,Sir.
My google mail is thatsforyouall@gmail.com .